Sideen ilmahayga uga joojin karaa mujuradayda?
Kormeerku wuxuu fududeeyaa si tartiib tartiib ah
Buugaag sida qalab
Cannaanka Easter, Santa Claus iyo jilbaha jilicsan ee ficilka
Carruurta iyo socod-baradka ayaa si dhib leh loo sawiri karaa iyada oo aan lahayn mujuruc, sababtoo ah waxay ka yaryihiin ama ka yar yihiin waxyaabaha ay jecel yihiin iyo waalidiintu waa ku faraxsan yihiin marka farcankiisa la keeno nasasho. Hase-yeeshe, waalidiin badan ayaa dareemaya ammaan la'aan marka ay la kulmaan wakhti fiican si ay uga takhalusaan mujaajiladooda.
Talooyin ku saabsan mujurucda
Khubarada qaarkood waxay yiraahdaan waa in ilmaha laga saaro mujuruca ka hor sanadka labaad ee nolosha.
Sababta tani waxay tahay in isticmaalka joogtada ah ee mujuruca uu yahay khatar ah in ilka lagu dhaqo ama daanka uu ka yimaado ilmaha.
Si kastaba ha ahaatee, bayaankan guud lama isticmaali karo ilmo kasta, maaddaama horumarinta saanqaadaha si dabiici ah u socdo heerar kala duwan.
Carruurta intooda ugu badan, mujuruca ayaa badanaa loo isticmaalaa si loo xaqiijiyo. Gaar ahaan habeenkii waa la sii kordhiyaa. Sababta isticmaalka mujurucu waa dabeecadda ilmaha. Niyadjabka nuugista ayaa xasuusta nuugista naaska hooyada, taas oo muhiim u ah koritaanka ilmaha. Naas-nuujinta marka lagu daro nafaqada sidoo kale waxay leedahay hawl karnimo.
Hooyooyin badan oo kalkaalisooyin ah ayaa xaqiijin doona in ilmuhu badanaa deggen yahay habeenkii oo keliya hadiyadii naaska. Nabadu waxay sameyn kartaa shaqo isku mid ah.
Haddii aadan ilmaha siineynin mujuruc, waxaa dhici karta in ilmuhu doorto suunka suunka bedelka.
Si kastaba ha noqotee, haddii qofku aaminsan yahay aragtida khubarada, sidaa daraadeed suulka ugu nuugista laakiin markaa mujuruca waa la doorbidi karaa, Sababaha ayaa mar ah in nuugista jaceylaha lagu xaqiijinayo in laga tago si ka dhakhso badan nuugista suulka.
Waxaa suurtagal ah in si qalad ah loo nadiifiyo ilkaha, taas oo sababi karta nuugista muddo wakhti dheer ah, waxay sidoo kale ka sii daraysaa suulka marka loo eego mujuruca.
Intaa waxaa dheer, waxaad qaadan kartaa hadiyadda mujuruc ka wanaagsan kan suunka ah ee ilmuhu had iyo jeer leeyahay. Si kastaba ha noqotee, waalidiin badan oo cusub, su'aashu way sii haysaa, sidaad ilmahaaga ugu wanaagsanaan karto mar kale mujuruc wanaagsan.
Ka hor inta aanad ladnaanin waa marka ugu horeysa ee habeyn. Sidaa darteed, ha u ogolaan inay u noqoto mid si joogta ah u adeegsanaysa bilawga, sababtoo ah taasi waxay ka dhigeysaa mid sii fududeyneysa ka dib. Laga bilaabo bilowga waa inaad u tagtaa mujuruca waqtiyada qaarkood sida marka la seexdo ama u dammaanad qaadid.
Intaa waxaa dheer, waa inaadan si ula kac ah u siin ilmaha ilmaha mujuruc ah hal maalin ilaa mid kale. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagula talinayaa in si tartiib tartiib ah looga saaro mujuruca, sababtoo ah dhadhanka dhamaystiran waa mid sahlan. Waalidiintu waa inay u gudbiyaan ilmaha oo ay xaqiijiyaan in ay noqon karto mid aad u weyn in ay noqoto gabar weyn ama wiil yar oo hadda ah iyo in dhab ahaantii aadan ubaahnayn mujurji.
Si aad ugu sahlanaato kuwa yaryar inay nastaan, waxaad isticmaali kartaa qalabka kala duwan. Suurtagalnimada waa, tusaale ahaan, si aad u hesho buugga carruurta ee mawduucan. Waxaa jira xulasho aad u ballaadhan oo buugaagta wax lagu barto oo sidoo kale wax ka qabanaya, tusaale ahaan, mawduuca xanaanada, walaalaha ama dhererka.
Caruur badan ayaa ka sheekeynaya sheekooyinkan oo waxay doonayaan inay marar badan dib u soo celiyaan. Conny uma baahnid mujurjiimo, markaa inta badan waxaad horumarisaa baahida loo qabo in la joojiyo baahida loo qabo mujuruca iyo jajabku waa sahlan yahay.
Ilmuhu wuu fahmi karaa in ay macquul tahay inuu isticmaalo mujuraca marar badan.
Hab kale oo weyn oo loo fududeeyo ilmaha in uu ku yiraahdo nabadgelyo leh nabadgelyo waa inuu u dabaaldego wanaagga si uu u cadeeyo ilmaha in cutubku uu dhammaado.
Si la mid ah luminta iliga, waxaad isticmaali kartaa jilbaha jilbaha si ay ula socoto geedi socodka la midka ah keenista mujuraca.
Cadaadiska ayaa markaa bedelaya mujuruca, kaas oo la dhigo barkin, hadiyad. Fursad kale waa in lagu daro Oster Bunny ama Masiixa Ilmaha oo keena mujuruca. Miisaanka Easter ka dibna beddelaa mujuraca si uu u wanaagsanaado, sida faraska jilicsan.
Qof kasta oo kale ee ku jira goobaha saaxiibada ama qoyska, ayaa sidoo kale ka wada hadli kara beddelka mujuruca in uu ubadkiisa kale yaryahay. Waalidku markaa kadib ayaa lagu sharxi karaa, tusaale ahaan, in ilmaha yaryar uu hadda u baahan yahay nabadgelyo.
Maadaama ay carruurtu rabaan in ay noqdaan kuwo dheer iyo khibrad badan, dooddani waxay inta badan si fiican u shaqaysaa. Waxaa laga yaabaa sidoo kale inay la jaan qaadaan jimicsiga jilitaanka ama Oster Bunny / Christ Child, kuwaas oo ilaalin doona oo kalsooni ahaanna u aqoonsan doona dhammaan arrimahan. Waxaa muhiim ah kiis kasta oo aad u riixdid cunugaaga waxba.
Ilma kastaa wuxuu leeyahay qadiyadiisa. Sidaa darteed ha u jeesan naftaada inaad is barbardhigto, laakiin si tartiib ah ilmahaagana uga jooji mujuruca. Hagaagsanaan, tani maaha musiibo ilkaha carruurta - marka dhan, waxaan dhamaanteen ka badbaaday nabarka.
Daryeelka ilmaha - calaacal mucjisada ilmaha